စက်တင်ဘာထာဝရ: ၃ . ၁၀ . ၂၀၀၉ တွင် သံဃာတော်များရွတ်ဆိုကြရမည့် ပါဠိဘာသာဖြင့် ရွတ်ဆိုသောကမ္မ၀ါစာ
၃ . ၁၀ . ၂၀၀၉ တွင် သံဃာတော်များရွတ်ဆိုကြရမည့် ပါဠိဘာသာဖြင့် ရွတ်ဆိုသောကမ္မ၀ါစာ
သုဏာတု မေ ဘန္တေ သံဃော ။ စဏ္ဍာ ရုဒ္ဓါ ရဘသာ ၀ိဟေသကာ အဒယလုကာ မဟာစောရယောဓရာဇာနော မရမ္မရဋ္ဌေ ဘိက္ခူနံ မာရေန္တိ သံဃဉ္စ ဗန္ဓန္တိ ၀ိဟေဌေန္တိ အက္ကောသန္တိ ပရိဘာသန္တိ ၊ ယဒိ သံဃဿ ပတ္တကလ္လံ သံဃော စဏ္ဍာ ရုဒ္ဓွါနံ ရဘာသာနံ ၀ိဟေသကာနံ အဒယာလုကာနံ မဟာစောရယောဓရာဇူနံ ပတ္တံ နိုက္ကုဇ္ဇေယျ ၊ အသမ္ဘောဂံ သံဃေန ကရေယျ ၊ ဧသာ ဉတ္တိ။ ။
၃.၁၀.၂၀၀၉ သီတင်းကျွတ်လပြည့်သံဃာ့ပ၀ါဏာပွဲနေ့တွင် ပ၀ါရဏာပြုရာကျောင်းတိုက်
များတွင်သံဃာတော်များ စုပေါင်းညီညာ ရွတ်ဆိုကြမည့် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ၀ိနည်းဥပဒေတော် ကမ္မ၀ါစာဖြစ်ပါသည်။
လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဝေပေးကြပါ။ ပရင်တာဖြင့်ထုတ်ပါ။ မိတ္တူကူးပါ။ ပရင်တာ မိတ္တူမရှိက လက်ရေး
ဖြင့်ကူး၍ကျောင်းတိုက်များသို့ ဆက်ကပ်ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါသည်။
ပေးပို့လာသူ အရှင်ဣဿရိယ ဆရာတော်အား အထူးကျေးဇူးတင်
ရေးသူ စက်တင်ဘာထာဝရ အချိန် 7:27 PM
အမျိုးအစား ပါဠိဘာသာဖြင့် ရွတ်ဆိုသောကမ္မ၀ါစာ